ကျန်းမာရေး Archives - ALANZAYAR
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ကင်ဆာအလွယ်တကူဖြစ်စေမယ့် အရာ (၆) မျိုး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ကင်ဆာအလွယ်တကူဖြစ်စေမယ့် အရာ (၆) မျိုး ဒီနေ့ခေတ်မှာ အချိန်အခါကြီးမှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ အင်မတန်မှာ မြင့်တက်နေပါတယ်။ကင်ဆာမဖြစ်အောင်လို့ အစားအသောက်ကို သတိထားနိုင်တာက အဓိကကျလာပါတယ်နော်။ သိုပေ့မယျ့ မနျမာနိုငျငံမှာနစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့အထဲမှ လူအမြားစုပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားသုံးနတေဲ့ အစားအစာတှကေဘဲ ကငျဆာဖွဈစနေိုငျတဲ့အဓိကအကွောငျးအရာတှဖွေဈနတောပါ။ (၁)မူးယစ်ဆေးဝါး အရက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို နေရာစုံ […]
နှုတ်ခမ်း လျှာ ပါးစောင် အာခေါင်များတွင် အပူဖူးအနာပေါက်ခဲ့သော်…..
အမေရိကန် ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို folic acid 400 micrograms ပြည့်အောင်စားသုံးပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Folate လို့လည်းခေါ်တဲ့ ဗီတာမင် B9 ဟာ DNA အသစ်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သွေးနီဥတွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ […]
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း (၆) ချက်
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် သင်ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာလို့ဆံပင်ဖြူနေရတာလဲ ဆိုပြီး တွေးမိကောင်း တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ ဆံပင်အရောင် ပြောင်းလဲလာခြင်းက နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဒါဟာနောက်ထပ် အခြေအနေအတွက် လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် လူငယ်တွေ ဘာလို့ ဆံပင်တွေ လွယ်လွယ်ဖြူရတာလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ […]
အပြိုစငျလေးရဲ့ မြိုးပှားအင်ျဂါဟာ ဘာကွောငျ့ကပျြသလဲ
အပြိုစငျလေးရဲ့ မြိုးပှားအင်ျဂါဟာ ဘာကွောငျ့ကပျြသလဲ အမြိုးသမီးကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အမြိုးသမီးအဂါင်္ဟာလညျး တဈခုအပါဝငျဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ သားအိမျပါရှိတာကွောငျ့ ကလေးမှေးဖှားတဲ့အလုပျကိုလုပျရပွီး အဲဒီသားအိမျကိုအထူးဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှေ နနေဲ့မှေးလမျးကွောငျး ကပျြခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး မှေးလမျးကွောငျးသေးလှနျးရငျကပျြတယျ ဆို တာမဟုတျပါဘူးတဲ့။မှေးလမျးကွောငျးနဲ့ လိငျစိတျဟာ ဆကျစပျနပွေီး လိငျစိတျဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ မှေးလမျးကွောငျးဟာ မကပျြတဲ့အပွငျ (၄) လကျမထိရှညျပါသတဲ့။ မိနျးကလေးတှရေဲ့မှေးလမျးကွောငျးဟာ […]
သငျ့ငယျပါ တိုဝငျသှားပွီလား။ ခုနကအကောငျး ခုကွညျ့လိုကျတော့မှ ငယျပါကို မတှတေ့ော့လို့ ခေါငျးထဲမှာ ဒိနျးခနဲတကျဆောငျ့ပွီး လနျ့သှားတဲ့သူမြား ရှိသလား။ တဈခါလညျး မဟုတျ နှဈခါလညျးမဟုတျ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး အထိတျတလနျ့ ဖွဈရပွီဆိုရငျ သငျ့မှာ koroလို့ ချေါတဲ့ ကွောကျလနျ့ခွငျး တဈမြိုး ဖွဈနပွေီလို့ပဲ ပွောပါရစေ။ တကယျတော့ […]
သင့်ရဲ့အကြားအာရုံကို တိုးတက်စေမယ့် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း (၈) ခု ယခုခေတ်မှာ လူကြီးတွေသာမက လူငယ်တွေပါ အကြားအာရုံ ချွတ်ယွင်းလာ ကြပါတယ်။ အကြားအာရုံ ချွတ်ယွင်းရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုကတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆူညံမှုကြောင့်ပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ နားထဲက ဆဲလ်လေးတွေက ပျက်စီးသွားပြီး အသံတုန်ခါမှုတွေကို ကြားနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အလွန်အကျွံ […]
ချောကလက်ကို နေ့တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အချက် (၅) ခု ချောကလက် ကြိုက်သူတွေက ချောကလက်တွေကို အများကြီး စားတတ်လို့ တခါတလေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် သံသယ ရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချောကလက်ကြိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ ကိုကိုး ပါဝင်မှုနှုန်းများလို့ အတော်ကို […]
“အာရုံကြောဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ (Betex) သောက်သောက်နေတတ်တဲ့ သူတွေ ဖတ်သင့်ပါကြောင်း”
“အာရုံကြောဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ (Betex) သောက်သောက်နေတတ်တဲ့ သူတွေ ဖတ်သင့်ပါကြောင်း” ဆရာ (Betex) ဆေး က ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ၊ ဇက်ကျောတက် ပျောက်ကင်း ပါ သ လား…..? ရေရှည်သောက်ရင်ကော အစာအိမ်ထိခိုက်နိုင်ပါ သလား? Betexဆိုတာ ဗီတာမင်ဘီ သုံးမျိုးကို အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့ […]
ခြင်ဆေး ၊ ခြင်ရိုက်ဘတ်တံတောင် လုံးဝမလိုတော့တဲ့အထိ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း အာမခံနိုင်တဲ့ သဘာဝခြင်ပြေးနည်း
ခြင်ဆေး ၊ ခြင်ရိုက်ဘတ်တံတောင် လုံးဝမလိုတော့တဲ့အထိ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း အာမခံနိုင်တဲ့ သဘာဝခြင်ပြေးနည်း ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ…..(ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) တခြားအိမ်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော့်အိမ်တော့အထပ်မြင့်ဆိုပေမယ့် ခြင်အရမ်းလာပါတယ် အပင်တွေကလည်းစိုက်တော့ခြင်ကအောင်းတယ်လေ ခြင်ဆေးဖျန်းဖို့ထွန်းဖို့ဆိုရင်လည်း အသက်ရှုကျပ်တတ်လို့ တခါတခါခြင်ရိုက်ဘတ်တံနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားရပါတယ် ခုတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ “စပါးလင်” မုန့်ဟင်းခါးထဲထည့်ချက်, ဟင်းထဲထည့်ချက်ဖို့ပဲသိခဲ့တာ ခြင်တကယ်ပြေးမှန်းခုမှသိတာ စပါးလင် ငါးရာဖိုးလောက်ဝယ်ပြီး အရိုးခြောက်အခွံခြောက်တဲ့အပိုင်းတွေဖယ်ထုတ်ဖြတ်ပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်လေးငါးဆယ်ချောင်းလောက်ထည့်ပြီးရေစိမ် အခန်းဒေါင့်လေးတွေမှာချထားလိုက်တာ […]
ကိုဗစ်ကြောင့် သေစရာမလိုတော့ဘူး လို့ ကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ကင်းလာသူ MDYကိုကျော်ကြီးရဲ့ ပြောပြချက်
ကိုဗစ်ကြောင့် သေစရာမလိုတော့ဘူး လို့ ရဲရဲကြီးအာမခံပီး ကုသရေးနည်းလမ်းတွေပြေပြတဲ့ မိသားစုလိုက်ကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ကင်းလာသူ MDYကိုကျော်ကြီးရဲ့ ပြောပြချက် ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါဟာဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အပြင်းအထန်ကူးစက် သေဆုံးနေကြတာ အားလုံးမမြင်ချင် မတွေ့ချင်မှအဆုံးပါ။ မကူးစက်သေးတဲ့ မြို့ရွာ ရပ်ကွက်ဆိုတာ မရှိသလောက်ထိကို ပျံ့နှံ့နေပါပီ။ သေဆုံးမှုတွေဟာလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရူးတွေကြောင့် […]